Dood cilmiyeed looga hadlayay adeegsiga argagixisada ee baraha xiriirka bulshada oo lagu qabtay Muqdisho – Radio Muqdisho
Dood cilmiyeed looga hadlayay saameynta ay argagixisadu ku leedahay adeegsiga baraha bulshada ay ku xiriiraan ee Internetka iyo sida looga hortagi karo ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho.
Dood cilmiyeedka ayaa waxaa ka qeybgalay mas’uuliyiin ka tirsan dowladda, aqoonyahanno, iyo suxufiyiin, waxaana la isku dhaafsaday fikrado ku wajahan sida looga hortagi karo in argagixisadu ay baraha isku xirka bulshada u isticmaalaan afkaartooda gurracan.
Gudoomiyaha Majmaca culumada Soomaaliyeed Sheekh Bashiir Axmed Salaad oo halkaasi ka hadlay ayaa tilmaamo ka bixiyay dacaayadaha been abuurka ah iyo muuqaallada argagaxa leh ee argagixisadu soo dhigaan baraha xiriirka bulshada, isagoo hoosta ka xariiqay in dowladda looga baahanyahay wacyigelin dheeraad ah.
Xildhibaan Maxamed Cumar Dhalxa ayaa sheegay in warbaahinta looga fadhiyo iney bulshada u soo gudbiyaan wax dan u ah bulshada, isagoo dhaliil u soo jeediyay qaar ka mid ah Websidyada iyo dadka baraha bulshada ku soo qora waxyaabo ay ku argagaxaan bulshada Soomaaliyeed.
Gudoomiyaha hey’adda wacyigelinta bulshada CCA Maxamed Cajiib oo isagu soo qaban qaabiyay dood cilmiyeedka ayaa sheegay in ujeedada ay kulankan u soo diyaariyeen ay tahay ka hadalka sida loo isticmaalo baraha xiriirka bulshada ee Intarnetka.
Waa dooddii ugu horreeysay ee nooceeda ah oo lagu qabto magaalada Muqdisho